समाचार - एक आकर्षक बक्स कसरी डिजाइन गर्ने
प्याकेजिंग आन्तरिक उत्पादनको लागि सुरक्षाको रूपमा अवस्थित छ, तथापि, विश्वको अर्थव्यवस्थाको विकासको साथ, प्याकेजि an्गले थप मूल्य थप्न आवश्यक छ। आजको उपभोक्ता परिदृश्यमा बाहिर देखिन, तपाईंले पुग्नु भयो "वाह कारक", जसले प्याकेजि design डिजाईनलाई अति महत्त्वपूर्ण बनाउँदछ।
तर कसरी आकर्षक प्याकेजि box बक्स डिजाइन गर्ने?
सर्वप्रथम हामीले तपाईको उत्पादको मुख्य चरित्र के व्यक्त गर्न चाहन्छौं भनेर फेला पार्नु पर्छ। तपाईको फाइदा के हो बजारमा उस्तै उत्पादनसँग दाँजेर। त्यसोभए तपाइँले यो थाहा पाउनुहुन्छ कि तपाइँले कसरी यस्तो देखिनुहुन्छ।
दोस्रो, तपाइँ स्पष्ट हुनुपर्दछ कि तपाइँको दर्शक को हो? यदि यो जवान केटीहरू हो भने, त्यसोभए डिजाईनलाई कूल र ज्वलन्त बनाउँदछ। यदि यो सफल मध्यम-वृद्ध मानिस हो भने, त्यसोभए डिजाइन सफा तर सुरुचिपूर्ण बनाउँछ।
त्यसो भए, तपाई बक्स आकार, सामग्री र शिल्पहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। यो पेशागत क्षेत्रमा जान्छ। तपाई कि त यो गर्नका लागि आफ्नै डिजाइन टोली भेट्टाउन सक्नुहुन्छ, वा हामीलाई सामान्य विचार / अवधारणा दिनुहोस्, हामी बाँकीलाई सहयोग गर्न सक्दछौं।